Inona no atao hoe Rating IP (Protection Ingress)? - News-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
FIAINANA: 2019-12-11 HITS: 61
Ny isa IP dia fantatra amin'ny anarana hoe Ingress Protection na laharana International Protection izay faritana amin'ny fenitra iraisampirenena EN 60529 (British BS EN 60529: 1992). Ity fenitra ity dia ampiasaina hamaritana ny haavon'ny fahombiazan'ny famehezana ny vala elektrika manohitra ny fidiran'ny vatan'ny vahiny toy ny fitaovana, ny loto ary ny hamandoana.
Inona no dikan'ireo tarehimarika roa ao amin'ny IP Rating?
Ny isa dia misy ny litera IP arahin'ny tarehimarika roa, raha soloina X ny isa iray dia midika izany fa ny laharana dia tsy naoty ho an'io famaritana io.
Ireo tarehimarika roa dia maneho endrika samihafa amin'ny fitaomana tontolo iainana:
• Ny tarehimarika voalohany dia maneho fiarovana amin'ny fidirana amin'ny zavatra mivaingana.
• Ny tarehimarika faharoa dia maneho ny fiarovana amin'ny fidiran'ny rano.
Inona ny naoty IP ho fidiko?
Raha tsy ampoizinao ny tontolo masiaka be vovoka na mando dia ampy ny isa IP ambany kokoa.
Any amin'ny toerana izay hanana vovoka, potipoti-javatra na potika be hifandraisany amin'ny vaingan-javatra na ranon-javatra, tianao ho azo antoka fa avo lenta ny laharana IP ary manana rindrina mahatohitra rano na tantera-drano manodidina ny manodidina anao ianao. .
Izahay dia mpanamboatra matihanina telefaona tsy misy rano. Afaka manome anao kinova analog sy ip izahay. Azontsika atao koa ny manamboatra ny telefaona mifanaraka amin'ny zavatra ilainao. Ny finday dia mety hahatratra ny laharana fiarovana tsy misy rano mankany IP66, IP67 ary hatramin'ny IP68. Azonao atao ny mampiasa ny findainay amin'ny indostria indostrialy, ivelany, angovo nokleary ary indostria simika.